Santiago Diaz. Kubvunzana nemunyori weThe Akanaka Baba | Zvazvino Zvinyorwa
Santiago Diaz. Kubvunzana nemunyori weThe Akanaka Baba
Photography: Santiago Díaz, Twitter nhoroondo.
Santiago Diaz ane chinyorwa chitsva kubvira zuva rekupedzisira 14, Ivo baba vakanaka, yandakaratidza mu nhema nhema pakutanga kwemwedzi. Muizvi indavhiyuque haisi yekutanga izvo zvinotipa isu, munyori uye screenwriter anotiudza nezvazvo uye nezvimwe zvakawanda. Ndinoonga nguva yenyu, kutarisa uye mutsa.
SANTIAGO DÍAZ - KUSVIRA
LITERATURE NEWS: Saka, chando, unoyeuka bhuku rekutanga rawakaverenga? Uye nyaya yekutanga yawakanyora?
SANTIAGO DIAZ: Ini ndanonoka kunyora, naizvozvowo Ini ndaive ndanonoka kuverenga. Pandaive mudiki uye pazera rangu rekuyaruka ndaingokwezva kumamhanzi, kudzamara ndawana mabhuku. Ndakafunga nezvazvo kakawanda uye handikwanise kurangarira yaive yekutanga, asi imwe yeakanyanya kundifadza yaive Makuva emhuka, ivo Stephen King. Ndinofanira kunge ndaive nemakore gumi nematatu uye ndichiri kurangarira kutya kwandakaita.
Kana chiri chinhu chekutanga chandakanyora nechinangwa chekuchidzidzisa, yaive iyo chinyorwa chemuvhi pamakumi maviri nemaviri kana makumi maviri nematatu. Ndinoyeuka zvaive zvakaipa kwazvo, asi zvakashanda kuisa musoro wangu muindasitiri, uye kusvikira nhasi.
AL: Uye nderipi bhuku iro rakakurova uye nei?
SD: Kunze kweiyo yandakakuudza nezvayo, zvirokwazvo wekutanga wemukoma wangu Jorge, Nhamba dzenzou. Ini ndanga ndiri munyori wechiratidziro kweanoda kusvika makore makumi maviri uye ndanga ndisati ndambofunga zvekunyora bhuku, asi zvaitaridzika kunge zvakanaka zvekuti ndakafunga kuti neniwo ndaida kuita chakadai rimwe zuva.
Kunze kwezvo, sekufunga kwangu kuti zvaitika kune vese chizvarwa changu, zvakandibatawo zvakanyanya Mubati mune ryenaJD Salinger.
AL: Iye zvino unotizivisa Ivo baba vakanaka uye zvakare iwe unofunga neziso rekubata ziso sepakutanga, Talion. Ndizvozvo here kana kuti pane zvimwe zvakawanda?
SD: Senge mukati Talion, in Ivo baba vakanaka Ini ndinotaura nezve iyo kudiwa kweruramisiro iyo nzanga ine. Muchiitiko chekutanga, zvakaitwa kuburikidza ne "ziso neziso" rakashandiswa nemutori wenhau aive nenguva shoma yekurarama. Munyaya ino yechipiri iri baba uyo, achitenda kuti yake mwanakomana ndizvo akasungwa zvisina kururama nekuda kwemhondi yemukadzi wake, anosarudza kubvuta kuvanhu vatatu vaanobata uye anovatyisidzira kuti varege kana vasina kuwana mhondi chaiyo yemuroora wavo: mutongi, gweta uye mudzidzi akaita sechapupu pakutongwa.
Kunze kwekuvhurazve humhondi uhu, tichaziva hupenyu hwevakabiwaof the mapurisa, hupenyu mu jeri nevamwe zvakavanzika kubva kuguta kubva kuMadrid. Ndinodada nazvo Talionhongu, asi ndinofunga game Ivo baba vakanaka Ndatora nhanho kumberi semunyori.
AL: Inspector Indira Ramos ndiye anotarisira kuchengetedza nyaya yeiyo "baba vakanaka" uye ane chakakosha phobia yehutachiona. Iwe unogona here kutiudza isu zvishoma kuti iye ndiani uye nezvaachafanira kusangana nazvo mukuferefeta uku?
SD: Indira Ramos ari mukadzi akasarudzika. Inotambura kubva ku obsessive inomanikidza kusagadzikana izvo zvinokutadzisa kubva kurarama zvakajairika hupenyu. Ini handidi kuita mutambo nazvo, asi zvakandiita kuseka kusangana neangu heroine nemuvengi asingaonekwe seiye utachiona.
Asi kunze kwekuva mukadzi wechienzi, ndiye mapurisa akatwasuka uye akatendeka, zvakanyanya zvekuti haazeze kupomera mhosva avo vanotyora mirau, kunyangwe vachifungidzirwa kuti vari kudivi rimwe chete. Izvi zvinoita kuti zvimuomere kuti akwane, asi zvishoma nezvishoma anotanga kuwana nzvimbo yake pasi. Akave ari muongorori kweanoda kusvika makore gumi ikozvino uye iyi ichave yako yakakosha uye midhiya kesi kusvika nhasi. Iwe unozofanirwa kutanga kuvimba nevamwe kana iwe uchifunga kuzvigadzirisa.
AL: Iwe wakatiudza mubvunzurudzo yapfuura kuti Paul Auster anga ari munyori wako waunofarira asi kuti iwe wakatsamwa naye. Tinogona here ikozvino kuziva zvikonzero uye kana munyori weAmerica awanazve zvaunofarira?
SD: Ha ha, kupfuura kutsamwa vaive kuodzwa mwoyo kwakateedzana. Ini ndinofungidzira ndichaipa mumwe mukana pane imwe nguva nekuti handiregi kuda nekukurumidza, asi ndinoziva kuti yangu yeku-ita rondedzero iri kutanga kundikurira.
AL: Uye ikozvino pane mibvunzo mishoma pamadhiramu. Semuenzaniso, ndeupi munhu mubhuku iwe waungadai uchida kusangana nekugadzira uye nei?
SD: Kune akawanda, mubhuku rega rega randakaverenga uye randinoda, pane hunhu hwandingadai ndakada kuzvigadzira. Asi saka, nechikepe munguva pfupi, ndingazodaro Ignatius J. Reilly, protagonist we Iko kusanganisa kweececiuos. Ini ndinowana iyo quintessential antihero, mumwe munhu anokuseka uye anoita kuti unzwe urombo.
AL: Iyo mania kana iri pamusoro pekunyora kana kuverenga iwe yausingakwanise kunzvenga, chii icho?
SD: Ini handikwanise kusiya izwi rimwe chete pamutsetse. Ndiri kukwanisa kunyora zvakare iyo ndima yese kuti ndizvidzivirire. Uye chinhu chakaipisisa ndechekuti ndinoziva kuti ibenzi, nekuti gare gare, pavanogadzirisa zvinyorwa, vanochinja zvese.
SD: Kunyangwe ndichifanira kuchinjira kumahotera kana zvitima, ndinoda kunyora muhofisi mangu Uye pese pandinowana nguva yemahara, asi ndiri inobudirira zvikuru munguva yemasikati. chinhu, chero kupi, asi nguva dzangu dzakanakisa ndidzo pamahombekombe ine tinto de verano muruoko. Izvo, kwandiri, zvakakosha.
AL: Mamwe mavara emhando aunoda kana iwe aungade kutamba semunyori?
SD: Ini ndinofarira nhoroondo yematsotsi, inonyatsoteverwa neiyo nhoroondo yenhau. Kwenguva yakareba Ndiri kukura zano rakaiswa mune imwe nguva uye chero zuva ini ndinogona kushamisika ...
SD: Ndichangopedza Gonhi, ivo Manuel Loureiro. Ndakaifarira uye ndinoikurudzira. Ndiri kuverenga zvakare zvese zvinowira muruoko rwangu pane imwe nhaurwa, asi Handikwanise kukuudza nekuti ndizvo zvichave yangu inotevera novel ichave iri pamusoro. Kana zvese zvikafamba zvakanaka, anenge ari iyechikamu chechipiri cheIndira Ramos.
SD: Ndingafarire kutaura neimwe nzira, asi ndizvo zvakaoma kwazvo. Kunze kweyekuti, sekutaura kwako zvakanaka, kune yakanyanya kupihwa kune vashoma vaverengi, pane iyo kugura, ine vaparadzi yakapwanya, asi kunyanya vanyori. Ini ndinofunga isu tinofanirwa kutanga kusimudzira kuziva kuti zvipedze izvo nekukurumidza sezvazvinogona. Ini ndatova nechikafu chetsika padenderedzwa rangu repedyo kuramba chero mhando yekubiridzira. Ndicho chinhu chatinofanira kuita isu tese.
Padivi rakanaka, taura izvozvo vaverengi vane nzara yenyaya dzakanakaSaka kana mumwe munhu akawana imwe, ndine chokwadi chekuti vachaona kupenya kwezuva.
AL: Uye, pakupedzisira, inguvai yedambudziko ratiri kurarama mukufungidzira iwe? Iwe unogona here kuchengeta chimwe chinhu chakanakira kana chinobatsira kune enguva yemberi zvinyorwa?
SD: Ndiri kuzvinzwa zvakanyanya kune vanhu vakandikomberedza, vandakaona vane nguva inotyisa, kushaya rovha uye kuvhara mabhizinesi. Ndine rombo rakanaka, nekuti denda risati rasvika ndaitoshanda pamba, saka, mupfungwa iyoyo, hupenyu hwangu hauna kuchinja zvakanyanya.
Padivi rakanaka, kutaura izvozvo, tavharirwa, Ndakave nenguva yakawanda yekunyora. Asi ini handifunge kuti zvinoumba; nyaya dziri mumugwagwa uye imomo unofanira kudziwana. Ndinovimba tinokwanisa kukunda husiku huno kamwe kwenguva dzose. Ndinofunga isu tave kutanga kuona mwenje.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Hurukuro » Santiago Diaz. Kubvunzana nemunyori weThe Akanaka Baba
Ini ndoda kusangana nevanyori vanotanga kunonoka zvishoma muunyanzvi hwekunyora, zvinoita kuti ndinzwe kuti haisi nyaya yenguva asi yenguva.
Akanakisa Agatha Christie Mabhuku